I-Bitcoin idlula kwaye ihlala ngaphezulu kwe- $ 5000 | Iindaba zeGajethi
Kuzo zonke ezi nyanga zidlulileyo, i-cryptocurrency ye-Bitcoin ibisemilebeni yomntu wonke, ekungazange kubulewe kuye, ngakumbi kwiWall Street, ethi nangona iyaliwe ayinakho ukuyenza imali encinci, ukusukela oko inani leenkampani ekubheja kulo lingaphezulu.
Kwimvelaphi yayo, le mali yayinxulunyaniswa nokusebenza kwegama elithandabuzekayo kodwa emva kokuvalwa kweemarike eziphambili zewebhu apho yayinxulunyaniswa khona, ukusetyenziswa kwayo kwandisiwe kwamanye amacandelo. Ngenxa yempumelelo, eyona mali iphumelele kakhulu kwihlabathi, i-Bitcoin, inelungelo idlula i-5.000 yeedola.
Kwezi nyanga zidlulileyo sibonile indlela amanye amazwe athe aqala ngayo ukuvala i-ICOs, intshukumo ebejolise ekonakaliseni ukusetyenziswa kwale mali, into engakhange yenzeke nangona iyichaphazele ngaphezulu kwenyanga ephelileyo, apho iMali yaqala khona ukwehla kwixabiso elifikelele kwi- $ 3.000. Kodwa kwiintsuku zamva nje, i-Bitcoin ibuyile emgceni kwaye igqithile kwi-5.000, ukufikelela kwixabiso eliphezulu lama- $ 5.652, Ngexesha lokubhalwa kweli nqaku
Njengesiqhelo, asazi ukuba sesiphi esona sizathu siphambili esivelise ixabiso lale mali ye-imali yedatha, kodwa isenokuba inxulumene nefolokhwe entsha ebizwa ngokuba yiSegWit2X. Ukuvela kweBitcoin Cash kunye nenye imali entsha ebizwa ngokuba yiBitcoin Gold, imali entsha yedijithali kodwa engafaniyo neebhitcoins nayo inokumbiwa kunye neeGPU, njengoko sinako nge-Ethereum, nayo iyakuba sisohlwayo.
Ukuthathela ingqalelo ukuba le mali ayilawulwa nguwo nawuphi na umzimba kodwa yimisebenzi eyenziwa mihla le kunye neendaba ezinxulumene noko, akukho ndlela yokwazi ukuba ixabiso liya kuqhubeka nokunyuka Ngale ndlela kwaye ukuba mhlawumbi ifikelele kwelona xabiso liphezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-Bitcoin idlula kwaye ihlala ngaphezulu kwe- $ 5000
Umphathi we-Samsung ubhengeza ukurhoxa emsebenzini
Iimpawu zeRazer zeFowuni zivuziswe ngokupheleleyo